SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Zulu
IYI NDEIMWE yetunyika tudiki pasi rose, uye iri pamakomo eAlps pakati peSwitzerland neAustria. Mumazana emakore akapfuura, vanhu vechiCelt, vechiRhaetian, vechiAlemanni nevekuRome, vose vakambogara munyika iyi. Iye zvino, pavanhu vanogara muLiechtenstein, vanopfuura hafu yavo ndeverudzi rwechiAlemanni, urwo rwakatanga kugara munyika yacho makore anenge 1 500 akapfuura.
Mutauro wechiGerman ndiwo unoshandiswa kuLiechtenstein pakuita zvebhizimisi uye pakudzidza, kunyange zvazvo mataurirwo anoitwa mutauro wacho achisiyana munzvimbo nenzvimbo. Mhando mbiri dzezvokudya zvakakurumbira muLiechtenstein iTüarka-Rebel, chikafu chemhando yepamusoro icho chinogadzirwa nechibage, uyewo Käsknöpfle, musanganiswa wemasipageti nechizi.
Vanhu vakapfeka hembe dzeko dzinoyevedza
Kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yacho kunoita kuti vashanyi vakwanise kuona makomo akavharwa nesinou, mipata yakasvibirira, minda yemizambiringa, uye miti yakasiyana-siyana. Somuenzaniso, mukanyika aka kari mumakomo, munowanikwa mhando dzemaruva emusango dzinoda kusvika 50. KuLiechtenstein kunewo mamiziyamu, zvivako zvinoitirwa mitambo uye makambani anogadzira waini. Saka vanhu vanoshanya kunyika yacho mungava mumwaka wekupisa kana kuti wechando.
Kubvira kuma1920, Zvapupu zvaJehovha zvanga zvichiita basa muLiechtenstein. Pari zvino munyika iyi mune Zvapupu zvinenge 90 zviri kudzidzisa Bhaibheri vanhu vomunyika yacho nevanenge vashanya.
Vagari vemo: 37 000
Guta guru: Vaduz
Mutauro unonyanya kushandiswa: German
Zvitendero: Vanhu vakawanda vanopinda Roma
Pamashoko ari pasi apa, ndeapi anotsanangura zvakaita Liechtenstein?
Pasi rose, Liechtenstein ndeimwe yenyika mbiri dzakapoteredzwa nenyika dzisina kubatana negungwa.
Ine marudzi anopfuura 50 emhuka dzinoyamwisa.
Ine zvinhu zvinomera zvemarudzi anenge 1 600.
Inyika isina masoja.
Mhinduro: Zvose zvataurwa ndezvechokwadi.
Spain inyika izere nevanhu vemarudzi akasiyana-siyana. Hakuna nyika inogadzira olive oil yakawanda kupfuura Spain.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kushanya kuLiechtenstein